विदेशी अवैध नागरिकको सुरक्षित आरक्ष बन्दै गोरखा, रोहिंग्या शरणार्थी चारबर्षदेखि गोरखामा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : ४ चैत्र २०७६, मंगलवार ०९:०६
बर्माको रखायनबाट सन् २०१२ मा भागेर नेपाल पसेका ३० बर्षका अबुल उस्मान सपरिवार गोरखामा बस्दै आएका छन् ।
साथै उनले अन्य रोहिंग्या शरणार्थीको साथ लिएर भूकम्प पीडितहरुको घर बनाउने काम गरिरहेको पाइएको छ । अहिले उनी श्रीमती आशिका बिबी, दुई छोरीहरु सतरा बेगम र प्रमिना आतवसहित गोरखा नगरपालिका २ कोखे आहालेको प्रहरी चौकीको आडमा डेरा गरेर बस्ने स्थानीय गयासुद्धिन मियाँ बताउँछन् ।
घर बनाउने ठेक्का लिएर उनले डेरागाउँ, अश्राङ, झिँगटे, कोखे लगायतका ठाउँमा घर बनाउने काम गर्ने स्थानीयबासी बताउँछन् । २० बर्षका महम्मद सलिम, २६ बर्षका सिकन्दर मियाँ, २५ बर्षका अफ्ताब हुसेन, २१ बर्षका मोहम्मद अब्दुल्लाह र १७ बर्षका मोहम्मद सादक २०७२ सालको भूकम्पदेखि यहाँ बस्दै आएका हुन् ।
शरणार्थीलाई शिविरबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुलाई अबैध मानिए पनि उनीहरु बिगत चारबर्षदेखि गोरखामा काम गरिरहेका हुन् ।
रोहिंग्या शरणार्थीले भूकम्पपछि यहाँको मुस्लिम बस्तीका करिब ३० भन्दा धेरै घर बनाइसकेका स्थानीयबासी बताउँछन् । ‘आहाले, गाईखुर, डेरागाउँ र झिँगटेमा काम ग¥यौं’, अबुल उस्मान भन्छन्, ‘ठेक्का लिन्छौं । अनि काठमाडौं कपन क्याम्पबाट मान्छे बोलाउँछौं र काम गर्छौं । एक महिनामा एउटा घर तयार गरिदिन्छौं ।’ मुस्लिम बस्तीबाहेक कामका लागि अरु गाउँमा भने अहिलेसम्म नगएको उनीहरु बताउँछन् ।
भूकम्प पीडितले पाउने तीनलाख रुपैंया अनुदानको घर उनीहरुले बनाएका स्थानीयबासी बताउँछन् । अरुले भन्दा धेरै नै सस्तो दरमा काम गर्ने भएकाले गाउँलेले उनीहरुलाई खोजीखोजी काम दिने गरेको स्थानीयबासी गयासुद्धिन मियाँको भनाइ छ ।
गोरखाका ग्रामीण भेग विदेशी नागरिकको अवैध बसोबासका लागि सुरक्षित आरक्ष बनेको छ । शरणार्थी बनेर आएकाले जीविका चलाउने स्थलदेखि भ्रमण भिसामा आएकाहरुले बिभिन्न काम गरेर बस्ने सुरक्षित स्थलको रुपमा गोरखालाई प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । कोही कफीखेती गरेर कोही गाई पालेर, कोही पढाएर र कोही धर्मप्रचार गरेर बस्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।
अनाधिकृत रुपमा बसेकाहरुको खोजी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पोडेलले बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले २० जना भन्दा धेरैलाई जिल्ला छाड्न निर्देशन दिइसकेका छौं’, प्रजिअ पौडेलले भने, ‘अझै गाउँगाउँमा छन् भन्ने जानकारी आइरहेको छ । उनीहरु सबैलाई हामी भिसा अनुसारको काममा फर्काउँदैछौं ।’